NDIVO VANOJEKESA ZVAKAVANZIKA ZVAMWARI
"Asi kana iye asvika, Mweya wechokwadi, achakutungamirirai kuchokwadi chose ..." (Johane 16:13).
Ishe Jesu vane mashoko avakambotaura. Vakanga vari kuataura kuvadzidzi vavo. Vakaataura vava pedo kukwira kudenga. Tinoaverenga muna Johane 16:12. Vakati, "Ndichine zvizhinji zvandinoda kukuudzai; asi hamugoni kuzvigamuchira zvino". Vakabva vataura mundima inotevera yacho vachiti, "Asi kana iye asvika, Mweya wechokwadi, achakutungamirirai kuchokwadi chose". Mwari vane zvimwe zvinhu zvakadzama. Zvinhu izvi zvakavanzwa kuvanhu. Hazvinzwisisiki nepfungwa dzevanhu. Ndezve muHumambo hwaMwari. Zvino, Jesu vaida kutibatsira kunzwisisa zvinhu izvi. Asi havana kuzozviita. Vakasiyira Mweya Mutsvene basa iri. Saka Mweya Mutsvene ndivo vava kutijekesera zvinhu izvi. Zvinhu zvatakapiwa naMwari. Havana kuita zvekutitengesera zvinhu izvi.
1 VaKorinte 2:9-12 inoti, "Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi: Izvo ziso zvarisina kuona, nenzeve zvaisina kunzwa, nezvisina kupinda mumoyo wemunhu, izvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Asi Mwari wakazarurira isu neMweya wake; nokuti Mweya unonzvera zvinhu zvose, kunyange zvinhu zvakadzika zvaMwari. Nokuti ndiani pavanhu anoziva zvemunhu, kunze kwemweya wemunhu uri maari? Saizvozvowo zvaMwari hakuna munhu anoziva, kunze kweMweya waMwari.Â Nesu hatina kugamuchira mweya wenyika, asi Mweya unobva kuna Mwari, kuti tizive zvinhu zvatinopiwa pachena naMwari". Saka tinotenda Mwari. Ndivo vakaronga kuti Mweya Mutsvene vagare matiri!
Mwari vane zvinhu zvavakatipa. Vakatipa zvinhu izvi pachena. Havana kutitengesera. Zvino, Mweya Mutsvene ndivo vanotiratidza zvinhu izvi. Ndivo zvekare vanotibatsira kuzvitora. Asi kune vakawanda vanoshaya hanya naMweya Mutsvene. Saka vanorarama vasina zvinhu izvi. Vamwevo havatozivi kuti vane zvinhu izvi. Havazivi kuti ndezvavo. Mwari vane hupenyu hwavakavapa. Asi havazvizivi. Hupenyu uhu hunoshamisa. Asi vanorarama murima. Vanotambura. Vanoita sevanhu vasina chavakapiwa naMwari.
Kune vanhu vana Mweya Mutsvene. Vanhu vakadai havafaniri kurarama murima. Havafaniri kusaziva zviri mberi. Mweya Mutsvene chiedza. Ndivo chiedza chehupenyu. Chinokuvonesa zvawakapiwa naMwari. Chinoita kuti ugone kutora zvinhu izvi. Zvinhu izvi zviri muna Kristu. Mwari vane maropafadzo avakakupa. Vakatokupa kare. Vanoda kuti unakirwe nawo. Vakakupa hupenyu. Uhu hupenyu hwakazara. Vakakupa kururama. Vakakupa hutano hweVamwari. Vakakupa fuma. Vakasuka zvivi zvako. Vanoita kuti ugone kudyidzana naBaba. Aya ose maropafadzo. Asi Mweya Mutsvene ndivo vanokuratidza maropafadzo aya. Pamusoro pazvo, ndivo vanokudzidzisa kuashandisa. Iri rinotova rimwe remabasa avo.
Mweya Mutsvene ndivo mudzidzisi wangu. Ndivo vanonditungamirira. Vanozadza moyo wangu nemazano akanaka. Nokudaro, ndinorarama zvakangwara. Ndinoronga hupenyu hwangu zvakanaka. Mweya Mutsvene vanoita kuti ndinzwisise zvinhu zvemweya. Ndava werudzi rwavo. Saka ndinorarama semunhu werudzi rwavo. Nokudaro, ndinowedzera kunzwisisa hupenyu hwaKristu. Hupenyu uhu ndihwo hwandava kurarama. Hahunzwisiswi nevanhu venyika ino.